Access has been denied ကိုကျော်မယ်
Myanmar IT Resource Forum » GENERAL TECHNOLOGY » » Internet Knowledge » Access has been denied ကိုကျော်မယ်
1 Access has been denied ကိုကျော်မယ် on 16th January 2010, 1:50 pm
စုစုပေါငျးရေးသားခကျြမြား : 25
တညျနရော : ထားဝယ် ဒါဗေမဲ့ ရန်ကုန်ရောက်နေတယ်
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-06-25
ဖိုရမျ အကြိုးဆောငျ ရမှတျ : 44
နည်းပညာဆိုက်တွေ တော်တော်များများကို blogspot,wordpress နဲ့လုပ်ကြပါတယ် အခုတော့ကြည့်လိုက်ရဘူး
အခုဒီ အတိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖွင့်ကြည့်လို့မရပါဘူး Access has been denied ဆိုပီး ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်
အဲဒါ လေးကိုကျော်နည်းလေးပြောပြပါမယ် စာရေးမကောင်းသေးပါဘူး အမှားပါရင်ခွင့်လွှတ်စေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
အခု ကျွန်တော် blogspot ဆိုက်တခုကိုကျော်ပြပါမယ်
အဲဒါ ကိုကျော်ဖို့အတွက်ပထမဆုံး Firefox ရဲ့ Tools ထဲက Options.. ကိုဖွင့်လိုက်ပါ
အဲထဲမှာ Main ..,tabs.. ဆိုပီး (၇)ခုရှိပါတယ် အဲထဲက Advanced ကိုရွေးပါ
Advanced ထဲမှာ general,network...ဆိုပိးလေးခုရှိပါတယ် အဲထဲကမှ network ကိုရွေးလိုက်ပါ ရောက်ပီဆိုရင်အောက်ကပုံအတိုင်းပေါ်ပါမယ်
network ကိုရွေးလိုက်ရင်ညာဖက်မှာ Setting ဆိုတာတခုရှိပါတယ်
အဲဒါ ကို ကလင့်လိုက်ပါအောက်ကပုံအတိုင်း manual proxy configuration ကို ရွေးလိုက်ပါ
HTTP proxy ရဲ ညာဖက်ကဘောက်လေးထဲမှာ 212.93.193.89
Port မှာ ကတော့ 443
အားလုံးပိးပီဆိုရင် Ok နိုပ်ပီးရင်
Last edited by z3r0c00l on 16th January 2010, 2:15 pm; edited3times in total (Reason for editing : Link ပြင်လိုက်ပါတယ်အစ်ကို)
2 Re: Access has been denied ကိုကျော်မယ် on 16th January 2010, 2:12 pm
sorry ပါ ဗျာ
မလိုအပ်တာတွေ ရေးမိပီ ဖျက်လိုက်ပီနော်
3 Re: Access has been denied ကိုကျော်မယ် on 16th January 2010, 2:53 pm
ကို ထားဝယ်သားကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ........... ကိုထားဝယ်သား ရှင်းပြသွားတာ က http နဲ့ ကျော်တာပါ
ရေးလက်စနဲ့ တခါထဲ မေးတော့ မယ် website ကနေကျော်ဖို့ သိတဲ့ site လေးမသိဘူးလား ခင်ဗျ
ကျွန်တော် က တော့
4 Re: Access has been denied ကိုကျော်မယ် on 16th January 2010, 2:59 pm
5 Re: Access has been denied ကိုကျော်မယ် on 16th January 2010, 4:51 pm
ဒီလိုမျိူးတွေ စရေးပြီး သင်ခန်းတစ်ခုဖြစ်မှတ်ထားသင့်ပါတယ်
တစါလက်စတည်း ကိုဇေ ရေ
ကျော်ချင်တ.်ဆိုရင် ဒီအောက် လင့်ကို သွားကြည့်လိုက်ပါဗျာ
6 Re: Access has been denied ကိုကျော်မယ် on 18th January 2010, 2:19 pm
ကျွန်တော်တော့ ဆော်ဒီ Proxy နဲ့ပဲ ကျော်တယ်ဗျ။ တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်
လိုချင်တဲ့သူတွေ ကျွန်တော့်ကို PM ပို့လိုက်ပါ။ (ဘမ်းလိုက်မှာကြောက်လို့ ချမရေးတာပါ )
7 Re: Access has been denied ကိုကျော်မယ် on 18th January 2010, 7:18 pm
ကောင်း လိုက် တာ....... အခု မှပဲ အဆင် ပြေတော. တယ် နောက် အသစ် တွေ.ရင် တင် ပေးပါ အုံး
Access has been denied ကိုကျော်ရင် download link မပေါ်လာ တာ ဘာ ကြောင်. လဲ မသိဘူး နော်
download link ပေါ်တဲ. site လေး ကို သိရင် ပြော ပြပေးပါ အုံးနော်
share တဲ. အတွက် အား လုံး ကို ကျေးဇူး နော်
8 Re: Access has been denied ကိုကျော်မယ် on 18th January 2010, 8:49 pm
9 Re: Access has been denied ကိုကျော်မယ် on 23rd January 2010, 12:50 pm
:thinkagain ကျွန်တော်ကခုမှဒီဆိုဒ်ကိုရောက်တာပါ။။သိတာလေးပေါ့ဗျာ။moeyake ပြောတာတွေကကုန်လုနီးနီးပဲ.ဒါလေးမတွေ့လို့ပါ။ အမှားပါရင် sorry ပါနော်
Last edited by ٨††∂¢қєř on 23rd January 2010, 3:21 pm; edited 1 time in total (Reason for editing : plz use code bro)
10 Re: Access has been denied ကိုကျော်မယ် on 23rd January 2010, 1:51 pm
မင်္ဂလာပါ ကို mg black ရေ(ဒီကနေပဲ နှုတ်ဆက်လိုက်တော့မယ်)
အခုလိုထပ်ထည့်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ ကိုဘလက်ရေ...
11 Re: Access has been denied ကိုကျော်မယ် on 29th January 2010, 9:45 am
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-01-28
လဲရတယ်ဗျို့၊ စုံအောင်သိလေပိုကောင်းလေပေါ့။ ဒီလိုပြောတာထက်လုံခြုံတဲ့နည်းရှိရင်လဲ
ပြောကြပါအုံး၊ အပြုသဘောအတွက်သာသုံးမှာဖြစ်လို့ ဒါလေးတွေက အသုံးဝင်လှပါတယ်၊ တခါတခါ ကိုယ်တွေက
ဆင်းရဲလေတော့ အလကားရတာလေးယူချင်လေတော့ အကြောင်းအကြောင်းတွေကြောင့် ပိတ်ထားတာမြင်ရင်
စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ရတယ်လေ၊ ဘယ်သူမှာအပြစ်ရှိလဲ ဆိုတော့ ကိုယ့်မှာသာအပြစ်ရှိတာပါ၊ အလကားလိုက်ရှာနေတာကိုး၊ နောင်ဘ၀ မြန်မာပြည်မှာ လူပြန်ဖြစ်နိုင်ကြပါစေ၊
Last edited by ٨††∂¢қєř on 29th January 2010, 10:03 am; edited 1 time in total (Reason for editing : plz use code bro)
12 Re: Access has been denied ကိုကျော်မယ် on 31st January 2010, 2:44 pm
ကျွန်တော်ကတော့ bypass program တော်တော်များများသုံးဖြစ်တယ်။
အဲ့ဒါတွေက ကော်နက်ရှင်ကောင်းမှရတာများတယ်။ (Your-Freedom, Freegate, UltraSurf, JAP) စသဖြင့် သုံးရတာ အကောင်းဆုံးကတော့ (Your-Freedom) ပါ။ Saudi proxy ကလည်း တချို့ဟာတွေကို ဘန်းတယ်ဗျ။
လွယ်လွယ်လေးနဲ့ သုံးလို့ရတာတစ်ခုရှိသေးတယ် အဲ့ဒါကတော့ Firefox မှာ Add-on တစ်ထည့်ပီးသုံးတာ။
Mozilla Firefox > Tools > Add-ons > Get Add-ons > type in search box = tor-proxy
ပီးရင်ပေါ်လာတဲ့ tor-proxy toolbar ကို install လုပ်ပါ။ firefox ကို restart လုပ်ပေးပါ ဒါဆို အောက်က ပုံအတိုင်း toolbar တစ်ခုပေါ်လာမယ် (မျက်လုံးပုံလေးနဲ့)။ မျက်လုံးလေးဘေးမှာ ကိုယ်သွားချင်တဲ့ site URL ကို ရိုက်ပီး သွားလို့ရပီ။
13 Re: Access has been denied ကိုကျော်မယ် on 30th January 2011, 3:50 pm
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-12-23
ဒါလေးလဲ အသုံးဝင် တယ် ကျွန်တော်သုံးနေတာ တော့ တော်တော်များများ ကျော် လို့ရတယ်ဗျ သူများတွေတင်ပြီးသားလားတော့မသိဘူးphoto attach လုပ်ပြီးမတင်တတ်လို့Link လေးပဲ share ပေးလိုက်တယ်ဗျာ အသုံးပြုနည်းကတော့ အဲ မှာပဲ read လိုက်ပါနော် အသုံးဝင်ပါစေးD
14 Re: Access has been denied ကိုကျော်မယ် on 31st January 2011, 3:02 pm
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-08-13
[You must be registered and logged in to see this link.] ကနေ appspot proxy ဆိုပြီးရှာကြည့်လိုက်ပါ ထိပ်ဆုံးမှာ နေ့တိုင်း Update ဖြစ်နေတဲ့ဆိုဒ်ကို ပြပေးထားပါတယ်..ဘယ်ဆိုဒ်မဆို ကျော်လို့ရပါတယ်..
15 Re: Access has been denied ကိုကျော်မယ်